FAILIMON 1 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (FAI 1)
Akwụkwọ ozi a si nꞌaka m Pọl, onye e tinyere nꞌụlọ mkpọrọ nꞌihi Kraịst Jisọs na site nꞌaka nwanna anyị Timoti. Anyị na-edetara gị ya ezi enyi anyị na onye anyị na ya na-arụkọ ọrụ, Faịlimọn.
Anyị na-edetakwara ya nzukọ Kraịst dị nꞌụlọ gị, na nwanna anyị nwanyị Afịa, na Akipọs onye anyị na ya so na-alụ agha a.
Ka Chineke Nna anyị na Onyenwe anyị Jisọs Kraịst nye unu amara ya na udo ya.
Nwanna m Faịlimọn, ana m ekele Chineke ekele mgbe ọ bụ m na-echeta gị nꞌekpere nile m na-ekpe.
Nꞌihi na oge nile ka m na-anụ ihe banyere otu i si hụ ụmụ Chineke nile nꞌanya, na ụdị okwukwe i nwere nꞌebe Onyenwe anyị Jisọs nọ.
Ekpere m na-ekpe nꞌihi gị bụ ka Chineke mee ka ndị ahụ nile naesite na ndụ gị na nꞌọnụ gị na-anụ ozi ọma ahụ bụrụ ndị ga-ekpebi iso Kraịst nꞌihi ihe ọma ha na-ahụ nꞌime gị nke na-esi nꞌebe Kraịst nọ abịa.
Ugbu a, ọ dị ihe m chọrọ ka i meere m. Enwere m ike ịsị na ihe a bụ ihe ị na-aghaghị ime site nꞌaha Kraịst nꞌihi na ọ bụ ihe dị mma ime eme. Ma nꞌihi ịhụnanya m nwere nꞌebe ị nọ, achọghị ịkwagide gị ka i mee ya.
Biko, arịrịọ m na-arịọ gị bụ nꞌisi Onisimọs, onye e mere ka ọ bụrụ nwa m nꞌime Kraịst, onye m ritere nꞌuru nye Kraịst oge a m nọ nꞌụlọ mkpọrọ.
Na mbụ, o nweghị uru ọ bụla Onisimọs baara gị, ma ugbu a, ọ bụ onye ga-abara gị uru na onye gaabakwara m uru.
Ọ gụsịrị m agụụ ike ime ka mụ na ya nọdụ nꞌebe a, ka ọ na-enyere m ụdị aka ị gaara enyere m nꞌime ụlọ mkpọrọ a m nọ nꞌihi ozi ọma.
Ma eleghị anya Onisimọs si nꞌụlọ gị gbapụ maka ịnọ nwa oge nta, ma ugbu a ọ na-alọghachi ka gị na ya nọọ ruo ebighị ebi.
Nꞌihi nke a, ọ bụrụ nꞌezie na ị gụrụ m dị ka enyi gị, nabata Onisimọs dị ka ị ga-esi nabata m.
Biko, ọ bụrụ na o mejọrọ gị nꞌụzọ ọ bụla, ọ bụrụkwa na ọ dị ihe ọ bụla o zuru, gụọ ya dị ka ụgwọ m ji gị.
Were okwukwe kwadooro m ebe m ga-anọ nꞌihi na enwere m olileanya na Chineke ga-aza ekpere unu ime ka m si nꞌebe a pụta bịakwute unu.
Epafras, onye mụ na ya nọ nꞌụlọ mkpọrọ nꞌihi Kraịst Jisọs na-ekele unu.
Mak, na Aristakus, na Dimas, na Luuku, ndị mụ na ha na-arụkọ ọrụ na-ekelekwa unu.
Ka amara Onyenwe anyị Jisọs Kraịst dịnyere mmụọ unu.
FAILIMON 1 / FAI 1